Isikhululo senqwelomoya saseBudapest siqhekeza uqhagamshelo lweKraków
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Isikhululo senqwelomoya saseBudapest siqhekeza uqhagamshelo lweKraków
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • IHungary Iindaba eziPhulayo • iindaba • Iindaba zasePoland • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ngamana 2, 2018
Ukuqhubeka nokufumana ukukhawulezisa okunamandla kwizithuthi zabakhweli-ukurekhoda ukonyuka kwe-17% kwiQ1 - Isikhululo senqwelomoya saseBudapest samkele ikhonkco lalo elitsha ngokubhiyozela ukubhabha ngokusesikweni kwenkonzo yeLOT Polish Airlines eKraków. Phambi kokuphehlelela eyokuqala yeendlela zayo ezintsha zase-US ngomso, umphathi weStar Alliance uqalile ukunxibelelana nesixeko sasePoland sesibini ngobukhulu sisebenzisa ii-Q400s zayo.
Ukujongana nokhuphiswano kwisibini seenqwelomoya, ukusebenza kweLOT amaxesha amathandathu ngeveki eKraków kujoyina amaxesha asele ekho eenkonzo ezingama-33 kwiWarsaw Chopin, eqhubeka nokuma isikhundla sePoland njengemakethi yelizwe laseBudapest ye-15th. Ngama-72% esabelo kuzo zonke iinqwelo-moya ezicwangcisiweyo ngeveki ukusuka kwisikhululo senqwelomoya sedolophu enkulu yaseHungary ukuya ePoland, ngaphezulu kwe-120,000 yezihlalo zendlela enye ziya kufumaneka ukusuka eBudapest ziye kwilizwe laseMpuma Yurophu kweli hlobo.
“Intsebenziswano yethu kunye neLOT Polish Airlines yomeleze kakhulu kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo ngoko ke kuhle kakhulu ukumilisela enye indlela eneemfuno eziphezulu neqabane lethu elixabisekileyo,” utshilo uBelázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest. "Ngeentengiso ezinokubakho ngaphezulu kwama-30,000 abakhweli, silindele impumelelo enkulu kule ndlela, indawo abakhweli bethu abasixelele ukuba ibiphezulu kuluhlu lweminqweno yabo," wongeze watsho uJandu.